ဆေးထိုးအပ် ကြောက်သူများအတွက် သတင်းကောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဆေးထိုးအပ် ကြောက်သူများအတွက် သတင်းကောင်း
ဆေးထိုးအပ် ကြောက်သူများအတွက် သတင်းကောင်း
Posted by kyawmonkhant on Jun 1, 2012 in News | 11 comments
ဆေးထိုးဖို့ ဆရာဝန်ထံသွားရန် မလိုလားသူများနှင့် ဆေးထိုးအပ်ကြောက်သူများအတွက် ကြိုဆိုစရာ သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ MITတက္ကသိုလ်က သုတေသန ပညာရှင်များက စက်ကလေးတခုကို ဖန်တည်းခဲ့တာပါ။ အသံလောက်နီးနီးမြန်တဲ့ အရေပြားကတဆင့် ထိုးသွင်းရန် မြန်နှုန်းမြင့် ဂျက်ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန် သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူဟာ ဆေးဘယ်လောက်များများ ကိုယ်ထဲသွင်းမယ် ဘယ်လောက် နက်နက်သွားမယ်ဆိုတာကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဂျက်ထိုးသွင်း ကိရိယာလေးဟာ ဆေးထိုးရန်အတွက် သေးငယ်ပြီး စွမ်းအားမြင့်သော သံလိုက်နဲ့ လျှပ်စစ်ဓာတ်ကို အသုံးပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ဆေးထိုးစက်အသစ်လေးဟာ အကျိုးကျေးဇူးအများအပြားရှိကြောင်း MIT သုတေသနပညာရှင်များက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ ဆေးထိုးစက်သစ်ဟာနေ့စဉ် ကိုယ်တိုင်ဆေးထိုးရန်လိုအပ်ပြီး ဆေးထိုးအပ်မုန်းသူများအတွက် အလွန်ကို အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်လို့ သိပ္ပံပညာရှင် ကက်သရင်း ဟိုဂမ်က ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လူတော်တော်များများဟာ ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဆေးထိုးရမှာကို ရှောင်ဖို့ ကြိုးစားကြပါတယ်။ ဆေးထိုးစက်ဟာ ဆေးရုံများထဲက မတော်တဆမှု အရေအတွက်တော်တော်များများ ကိုလည်း လျှော့ချနိုင်လိမ့်မယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုတခုက သူနာပြုများနဲ့ အခြားကျန်းမာရေးလုပ်သားများဟာ တနှစ်လျှင် အကြိမ်ပေါင်း 385000 မတော်တဆ အပ်စူးမှုကိုခံရတယ်လို့ ခန့်မှန်းထားခဲ့ပါတယ်။
မူရင်းသတင်းဖတ်လိုသူများနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများအတွက် BreakingnewsEnglishlessons.com (အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာလိုသူများ အတွက် website ကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်)။
နည်းပညာတွေတိုးတက်လာလို့ ပစ္စည်းအသစ်တွေ ပေါ်လာတာ ကြိုဆိုစရာပါ ။
နောက် နှစ်နှစ်သုံးနှစ်အတွင်းတောင် အဲ့ဒီဂျက် ဒီနိုင်ငံမှာသုံးနိုင်ပါ့မလားမသိဘူး ။ဈေးနှုန်းကွာခြားချက်မြင့်မားနေဦးမယ်ထင်တယ် ။
ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့ အလုပ်ခွင်မှာ လူနာတွေနဲ့ ထိတွေ့ရင်း မတော်တဆ အပ်စူးတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေ အရင်က ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိခဲ့ပေမယ့် နောက်ပိုင်း ကူးစက်ရောဂါတွေ အန္တရာယ်ကြောင့် သတိထားပြီး ကိုင်တွယ် အသုံးပြုရပါတယ် ။ အပ်ဖျားတစ်ထောက်စာ ဆိုပေမယ့် လေပူဖောင်းလေးအတွက်တော့ ဘဝတသက်စာ ဆိုတာလေး သတိရမိလို့ပါပဲ ။
အင်ဆူလင်ထိုးနေရတဲ့ ဆီးချိုဝေဒနာရှင်တွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပါ။
တော်တော်ဈေးကြီးမယ်ဆိုရင်တောင် ဝယ်သုံးနိုင်တဲ့သူတွေ ဝယ်သုံးမှာပါ….
မတူတဲ့ အခြားဆိုက်က အမြင်နဲ့ပြောရရင်
မူးယစ်ဆေးဝါး ထိုးတဲ့သူတွေရာ သုံးလို့ရမလားမသိ
ရ များရ ရင် အပ်ကတဆင့် ရောဂါကူးတာ တော်တော်လျော့သွားမယ်ထင်မိပါတယ်။
အပ်ကတဆင့် ကူးဆက်နို်င်တာတွေကို မစိုးရိမ်ရတဲ့အတွက် သတင်းကောင်းလေးပါ
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ဆေးထိုးအပ်စူးခံရလို့ ….. ကူးစက်ရောဂါဖြစ်ခံရသူတွေ ဘယ်လောက်တောင်များပြီလဲနော် …. ။ တခြား ရောဂါတွေတော့မပြောတော့ဘူး … အခုဆို ကမာ္ဘကိုခြောက်လှန့်နေတဲ့ HIV / AIDS တွေက အပ်ဖျားတစ်ဖျားစူးသွားလည်း ကူးနိုင်ခြေရှိတာပါပဲ ။
ဒီတော့ ဆေးထိုးအပ်ကိုင်တွယ်ပြီး အသုံးပြုနေရသူတွေအနေနဲ့ ….. ရော်ဘာလက်အိတ်လိုမျိုး စွပ်ပြီး ကိုင်တွယ်သင့်ပါတယ် ။ စူးမိသည့်တိုင်အောင် လက်အိတ်ရှိတော့ အသားကို တော်ရုံထိုးမဖောက်နိုင်တာမျိုးဆို … ကူးစက်ခံရနှုန်းလျော့နည်းသွားမလား တွေးမိလို့ပါ ။ ဘယ်သူ့မှာ ဘာရောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကို ကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့ မှ မမြင်ရတာလေ …. ။ အဓိကကတော့ ကိုင်တွယ်နေစဉ် သတိထားဖို့ပါပဲ ။
ဒါပေမယ့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံလို နိုင်ငံမျိုးမှာ … အောပရေးရှင်းခန်းမဟုတ်ပဲ ၊ သာမန်ဆေးထိုးတာလောက်ကို လက်အိတ်စွပ်ထိုးလျှင် … လူနာစိတ်ထဲ သိမ်ငယ်စိတ်တွေ ၊ ဒေါသတွေ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသေးတယ် ။
ဟူးးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး ရှေ့တိုးရလည်း ခက် ၊ နောက်ဆုတ်ရလည်း ခက်တဲ့ … ကာကွယ်မှုမျိုးပဲ …. ။
ပြောမယ့်သာပြောတာ … ဂျက်ပဲ ထွင်ထွင် ဘာပဲထွင်ထွင် … ဆေးထိုးအပ်ကြောက်တဲ့လူက ကြောက်ကို ကြောက်တာပါပဲ … အပ်မြင်တာနဲ့ကို ကြောက်နေတာ … ။
အပ်နဲ့ ထိုးလျှင် နာမယ်ဆိုတဲ့ အသိဉာဏ်ရှိ ၊ ကြိုတင်တွေးတော ခံစားတတ်တဲ့ အသိရှိတဲ့ လူသားတွေမို့ပါပဲ … ။
ဒီပစ်စီးမျိုး ပေါ်လာပြီဆိုတာ သိလိုက်ရပါပြီ။ english လို လေ့လာစရာ ဆိုက်နာမည်ပါ ဖော်ပြပေးလို့ ကျေးကျေးပါ
ဆေးထိုးအပ်မြင်ရင် ကိုကြောက်တယ်၊သွေးမြင်ရင်လန် ့ပါတယ်။
ချေးထိုးအပ်ကိုတောင် ကိုက်ချားမတဲ့ . .
အမယေး . . လွယ်ပုပဲ . . တိန် . . ကျေးပါမှ . . ဝှီးးး …